ချစ်တီးထမင်းရော ဆိတ်စွပ်ပါ စားလို့သိပ်ကောင်းဆိုတဲ့ နယူးဒေလီ [Review]
ချစ်တီးထမင်းရော ဆိတ်စွပ်ပါ စားလို့သိပ်ကောင်းဆိုတဲ့ နယူးဒေလီ [Indian Food Review]
11 Aug 2017 . 4:23 PM
[Zawgyi ][Unicode Below]
အရင်တပတ်က အိန္ဒိယစာ Collection အတွက် ကိုယ်တွေရန်ကုန်မြို့ထဲ တပတ် လျှောက်စား၊ လျှောက်စပ်စုကြရင်း နာမည်ကြီးတဲ့ နယူးဒေလီ ကိုပါ ရောက်သွားတယ်။ နာမည်ကြီးဆို ဝိုင်းက အပြည့်ပဲ။
အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လျှောက်သွား လျှောက်စားမယ့် အစားတစ်လိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် မြို့ထဲ ရောက်ခဲ့ရင် အဝဆွဲဖို့ကြံနေသူတွေ အိန္ဒိယအစားစာသမားတွေ သွားစားကို စားသင့်တဲ့ထဲ ပါ ပါတယ်။ တော်တော်များများ ဒီလောက် ညွှန်းနေမှတော့ ဘာတွေများ ကောင်းနေလို့လဲ?
ကဲ… အောက်ကို ဆက်ဖတ်ပြီး မျက်စိလေးနဲ့ အရင် သွားစားလိုက်ကြရအောင်နော်။
ဆိုင်ထဲ ဝင်တာနဲ့ ဖွင့်ထားတာ ကြာပြီဆိုတာ သိနိုင်တယ်။ သက်တမ်းရင့် ဆိုင်တွေထဲမယ် နာမည်လည်း ကြီးတယ်။ အပြင်ဆင်က ရိုးရိုးပဲ ခုံတွေ ခင်းထားတယ်။ စားပွဲ ၂ ဝိုင်း ၃ ဝိုင်း စုထိုင်ရတယ်။ ဆိုင်က မြေညီထပ်ကိုမှ အလွှာမြှင့်ထားတယ်။
ကိုယ်တွေလည်း အိန္ဒိယစာဆိုတော့ တော်တော်များများ စားဖြစ်ကြ အကြိုက်တွေ့မယ့်ဟာလေးတွေ မှာစားခဲ့လိုက်တယ်။
ဆိတ်သားအရသာ နူးအိတယ်။ အသားထဲ အနှစ်အရသာ ဝင်တယ်။ ထမင်းနဲ့ အရံဟင်း အတွဲစပ်လေးတွေကလည်း အိန္ဒိယအရသာစစ်စစ်မျိုး ခံစားရတယ်။ အရွက်ကြော်၊ အာလူး၊ ပဲဟင်း၊ အချဉ်၊ သောက်ရတဲ့ မန်ကျည်းချဉ်လေးပါ ပါတယ်။ အရည်ဆမ်းပေးတဲ့ ပဲဟင်းကတော့ နည်းနည်းကျဲတယ်။ အဲ့တာတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူးရယ်။
သူကတော့ ဆိမ့်နေတာပဲ။ အရသာလေးလည်း မှန်တယ်။သူနဲ့ တွဲစပ်စားရတဲ့ ပဲဟင်း၊ ကျသနီ၊ ချဉ်စပ်၊ ချိုစပ် အားလုံးအဆင်ကို ပြေနေရော။ အစပ်ဟပ်တည့်တယ်။
နောက်ထပ် မီနူးထဲက အမျိုးအစားရွေးစရာ တော်တော်များများတွေ့ရတယ်။ ဘာတွေ စားလာခဲ့သလဲဆို…
အကြိုက်ဆုံးအရသာလို့ ဆိုရမယ်။ ဆိတ်သားနဲ့ ပဲအရသာကိုမှ မွှေးဆိမ့်နေတာမျိုးကို ချဉ်စိမ့်စိမ့်လေး။ သူ့ဆိတ်ခြေထောက်စွပ်က ဘယ်ဆိုင်နဲ့မှကို မတူဘူး။ မှာစားကို စားသင့်တာ။ တပွဲနဲ့တင် ၂ ယောက်ကောင်းကောင်းစားလို့ ရတယ်။
ဈေးတွေက မြတ်မှ မြတ်ရဲ့လားလို့ ထင်ရအောင် အိန္ဒိယအရသာစစ်စစ်ကိုမှ လူတန်းစားအကုန်စားနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားတယ်။ ကိုယ်တွေ အဝပြဲ ၂ ယောက်စားတာမှ ၅၀၀၀ စွန်းစွန်းလေးရယ်။ ထမင်းအဝဆွဲသမားတွေ ရှယ်တန်တယ်။ မီနူးသာ ကြည့်သွားကြပါကုန်…
သူ့ဆိုင်ရဲ့ သဘောကျစရာ အကောင်းဆုံးပဲ လို့ ယူဆပါရစေ။ လူရှုပ်တယ်။ အမြဲ လူကျနေတတ်တယ်။ အဲ့ဒါကိုတောင် ပိုင်ရှင်က ဝန်ထမ်းကောင်လေးတွေကို ကောင်းကောင်း ကွပ်ကဲနိုင်တယ်။ လိုတာဘေးကနေ အမြဲကြည့်ပေးနေတာ။ မှာပြီးတာနဲ့ ချပေးတာမြန်တယ်။ အမြန်ဆုံးက ငွေရှင်းစနစ်။ လူတွေ စုပြုံကျနေလည်း လုံးဝမကျပ်သွားဘူး။
အိန္ဒိယစာဆိုတာ ဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင် လှိုင်လှိုင်နဲ့ အားရပါးရ စားရတာမျိုးဆိုတော့ ရန်ကုန်တွင်းမှာပဲ စိတ်ကျေနပ်လောက်စရာ အိန္ဒိယအရသာစစ်စစ်မျိုးကို အိန္ဒိယရောက်သွားသလို ခံစားရစေချင်ရင် နယူးဒေလီကိုတော့ လုံးဝ အပြတ်သတ်ထောက်ခံပါတယ်။ နာမည်တစ်ခုကို အချိန်တွေ အကြာကြီး ထူထောင်နိုင်တည်းက အရသာပြောစရာမလိုတော့ဘူးနော်။
ဆိုင်ဖွင့်ချိန်က မနက် ၇နာရီမှ ည ၉နာရီထိပါတဲ့နော်။ လိပ်စာက အနော်ရထာလမ်းမပေါ် ၂၈လမ်းနဲ့ ရွှေဘုံသာလမ်းကြားမှာပါ။ လမ်းမပေါ်ဆိုတော့ ကားရပ်ရ နည်းနည်းတော့ ခက်မယ်နော်။
Price-5 out of 5
Service-4 out of 5
Food -4 out of 5
Hygiene-3 out of 5
ရနျကုနျမွို့မှာ နပွေီး မစားဖူးရငျ လူဖွဈရကြိုး မနပျတဲ့ နယူးဒလေီ [New Delhi Restaurant]
အရငျတပတျက အိန်ဒိယစာ Collection အတှကျ ကိုယျတှေရနျကုနျမွို့ထဲ တပတျ လြှောကျစား၊ လြှောကျစပျစုကွရငျး နာမညျကွီးတဲ့ နယူးဒလေီ ကိုပါ ရောကျသှားတယျ။ နာမညျကွီးဆို ဝိုငျးက အပွညျ့ပဲ။
အလုပျကိစ်စနဲ့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ လြှောကျသှား လြှောကျစားမယျ့ အစားတဈလိုငျးတှပေဲဖွဈဖွဈ မွို့ထဲ ရောကျခဲ့ရငျ အဝဆှဲဖို့ကွံနသေူတှေ အိန်ဒိယအစားစာသမားတှေ သှားစားကို စားသငျ့တဲ့ထဲ ပါ ပါတယျ။ တျောတျောမြားမြား ဒီလောကျ ညှနျးနမှေတော့ ဘာတှမြေား ကောငျးနလေို့လဲ?
ကဲ… အောကျကို ဆကျဖတျပွီး မကျြစိလေးနဲ့ အရငျ သှားစားလိုကျကွရအောငျနျော။
ဆိုငျထဲ ဝငျတာနဲ့ ဖှငျ့ထားတာ ကွာပွီဆိုတာ သိနိုငျတယျ။ သကျတမျးရငျ့ ဆိုငျတှထေဲမယျ နာမညျလညျး ကွီးတယျ။ အပွငျဆငျက ရိုးရိုးပဲ ခုံတှေ ခငျးထားတယျ။ စားပှဲ ၂ ဝိုငျး ၃ ဝိုငျး စုထိုငျရတယျ။ ဆိုငျက မွညေီထပျကိုမှ အလှာမွှငျ့ထားတယျ။
ကိုယျတှလေညျး အိန်ဒိယစာဆိုတော့ တျောတျောမြားမြား စားဖွဈကွ အကွိုကျတှမေ့ယျ့ဟာလေးတှေ မှာစားခဲ့လိုကျတယျ။
ဆိတျသားအရသာ နူးအိတယျ။ အသားထဲ အနှဈအရသာ ဝငျတယျ။ ထမငျးနဲ့ အရံဟငျး အတှဲစပျလေးတှကေလညျး အိန်ဒိယအရသာစဈစဈမြိုး ခံစားရတယျ။ အရှကျကွျော၊ အာလူး၊ ပဲဟငျး၊ အခဉျြ၊ သောကျရတဲ့ မနျကညျြးခဉျြလေးပါ ပါတယျ။ အရညျဆမျးပေးတဲ့ ပဲဟငျးကတော့ နညျးနညျးကြဲတယျ။ အဲ့တာတော့ သိပျမကွိုကျဘူးရယျ။
သူကတော့ ဆိမျ့နတောပဲ။ အရသာလေးလညျး မှနျတယျ။သူနဲ့ တှဲစပျစားရတဲ့ ပဲဟငျး၊ ကသြနီ၊ ခဉျြစပျ၊ ခြိုစပျ အားလုံးအဆငျကို ပွနေရေော။ အစပျဟပျတညျ့တယျ။
နောကျထပျ မီနူးထဲက အမြိုးအစားရှေးစရာ တျောတျောမြားမြားတှရေ့တယျ။ ဘာတှေ စားလာခဲ့သလဲဆို…
အကွိုကျဆုံးအရသာလို့ ဆိုရမယျ။ ဆိတျသားနဲ့ ပဲအရသာကိုမှ မှေးဆိမျ့နတောမြိုးကို ခဉျြစိမျ့စိမျ့လေး။ သူ့ဆိတျခွထေောကျစှပျက ဘယျဆိုငျနဲ့မှကို မတူဘူး။ မှာစားကို စားသငျ့တာ။ တပှဲနဲ့တငျ ၂ ယောကျကောငျးကောငျးစားလို့ ရတယျ။
ဈေးတှကေ မွတျမှ မွတျရဲ့လားလို့ ထငျရအောငျ အိန်ဒိယအရသာစဈစဈကိုမှ လူတနျးစားအကုနျစားနိုငျအောငျ လုပျပေးထားတယျ။ ကိုယျတှေ အဝပွဲ ၂ ယောကျစားတာမှ ၅၀၀၀ စှနျးစှနျးလေးရယျ။ ထမငျးအဝဆှဲသမားတှေ ရှယျတနျတယျ။ မီနူးသာ ကွညျ့သှားကွပါကုနျ…
သူ့ဆိုငျရဲ့ သဘောကစြရာ အကောငျးဆုံးပဲ လို့ ယူဆပါရစေ။ လူရှုပျတယျ။ အမွဲ လူကနြတေတျတယျ။ အဲ့ဒါကိုတောငျ ပိုငျရှငျက ဝနျထမျးကောငျလေးတှကေို ကောငျးကောငျး ကှပျကဲနိုငျတယျ။ လိုတာဘေးကနေ အမွဲကွညျ့ပေးနတော။ မှာပွီးတာနဲ့ ခပြေးတာမွနျတယျ။ အမွနျဆုံးက ငှရှေငျးစနဈ။ လူတှေ စုပွုံကနြလေညျး လုံးဝမကပျြသှားဘူး။
အိန်ဒိယစာဆိုတာ ဟငျးခတျအမှေးကွိုငျ လှိုငျလှိုငျနဲ့ အားရပါးရ စားရတာမြိုးဆိုတော့ ရနျကုနျတှငျးမှာပဲ စိတျကနြေပျလောကျစရာ အိန်ဒိယအရသာစဈစဈမြိုးကို အိန်ဒိယရောကျသှားသလို ခံစားရစခေငျြရငျ နယူးဒလေီကိုတော့ လုံးဝ အပွတျသတျထောကျခံပါတယျ။ နာမညျတဈခုကို အခြိနျတှေ အကွာကွီး ထူထောငျနိုငျတညျးက အရသာပွောစရာမလိုတော့ဘူးနျော။
ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျက မနကျ ၇နာရီမှ ည ၉နာရီထိပါတဲ့နျော။ လိပျစာက အနျောရထာလမျးမပျေါ ၂၈လမျးနဲ့ ရှဘေုံသာလမျးကွားမှာပါ။ လမျးမပျေါဆိုတော့ ကားရပျရ နညျးနညျးတော့ ခကျမယျနျော။
FoodieEI – Akhayar